Adeegga Nabadda Madaniga ah wuxuu raadiyaa Lataliyaha Waxbarashada Nabadda (Ukrayn) - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Mudada meelaynta: 01/10/2022 – 03/31/2024
Codso: 01 / 02 / 2022
halkan guji si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo aad u dalbato
GIZ adeegga nabadda rayidka ah (CPS) barnaamijka dalka Ukraine.
"Tallaabooyinka waxbarashada nabadda si ay u taageeraan ka adkaanta polarities bulshada ee Bariga Ukraine" ayaa diiradda saaraya dhisidda hab wanaagsan oo kala duwanaansho iyo is-beddelka colaadaha aan rabshado la baaxadda yaraynta polarization bulshada ee Bariga Ukraine. CPS waxay taageertaa la-hawlgalayaasha kor u qaadida hababka waxbarashada nabadda, ee heerka nidaamka iyo heerka dhisidda awoodda shakhsi ahaaneed ee barayaasha, iyo sidoo kale wada-hadalka ku salaysan tallaabooyinka beddelidda khilaafaadka ee bulshooyinka. CPS Ukraine waxay la shaqaysaa ururada bulshada rayidka ah iyo hay'adaha dawladda labadaba. Qaybta Waxbarashada Nabadda ee CPS Ukraine ayaa hadda la shaqeeya lix ururada lammaane on mawduucyo kala duwan ee waxbarashada nabadda ee heer qaran iyo heer gobol, taageeraya dib u habaynta dugsiga qaranka "School Yukreeniyaan Cusub" kaas oo looga golleeyahay in lagu beddelo dugsiyada Yukreeniyaan galay jawi awood iyo nabad.
Falanqaynta iyo la socodka baahiyaha barayaasha (macalimiinta, shaqaalaha bulshada, cilmu-nafsiga dugsiga) ee ku sugan gobollada bartilmaameedka ah ee CPS si ay u horumariyaan xirfadahooda oo ay u kasbadaan ku-dhaqanka adeegsiga hababka waxbarashada nabadda
Horumarinta iyo hirgelinta tababaro, kormeero, iyo qaabab kale oo waxbarasho oo loogu talagalay barayaasha, iyadoo lala kaashanayo hay'adaha iskaashiga iyo la-hawlgalayaasha kale ee maxalliga ah
Kaalmaynta hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ee shaqadooda waxbarasho, tusaale ahaan in la naqshadeeyo dhacdooyinka, samaynta tababaro, manhajyo iyo agab waxbarasho, la-talin ku saabsan mawduucyada waxbarashada nabadda.
Isku xirka hay'adaha guud ee gobolka ama qaranka, ururada aan dawliga ahayn ee maxaliga ah iyo khubarada caalamiga ah
Wax ku biirinta barnaamijka CPS Ukraine ee waxbarashada gudaha iyo dhisidda istiraatiijiyadda
shahaado tacliimeed ee barbaarin/waxbarasho, cilmi nafsi, nabada, iyo daraasaadka colaadaha ama meelaha la midka ah
Khibrad xirfadeed oo ku habboon waxbarashada dadka waaweyn ee ku salaysan kartida; ku fiicnaanta isbeddelka colaadaha iyo nabad-dhisidda waa hanti
Khibrad wanaagsan ee barnaamijka CPS mawduucyada iyo hababka waxbarashada nabadda ee khuseeya, tusaale ahaan: takoor-diidka, kala duwanaanta, waxbarashada taariikhda, isgaarsiinta aan rabshad lahayn, dhaqamada soo celinta, barashada shucuurta-bulsheed
Khibrad ku habboon horumarinta manhajka macallimiinta/waxbarashada dadka waaweyn, la qabsiga hababka iyo dib u eegista buugaagta dugsiga iyo agabka waxbarashada
Xirfadaha wada xiriirka guud iyo kuwa dhaqamada dhaxe ee heer sare ah, waayo aragnimada fududeynta isgaarsiinta iyo iskaashiga wax ku oolka leh ee ka dhexeeya dugsiyada, waalidiinta, macalimiinta iyo ardayda waa hanti.
Khibrad u leh shaqada kooxeed, karti uu si dhakhso leh ula qabsado oo uu u helo habab hal abuur leh, xalka iyo jihaynta kheyraadka
Ku faseexnimada Ruushka iyo Ingiriisiga ama Jarmalka
Islaamku waxa uu ina bari karo faragelinta goob joogga
Abuurista miraha nabadda ee Ukraine
December 29, 2019 Warbixinnada Waxqabadka 0
Nofeembar 21-23 aqoon isweydaarsi ku saabsan koorsada 'Dhaqanka Xaafadda Wanaagsan', oo lagu dhex wado xarumaha waxbarashada ee Ukraine, ayaa la qabtay. Munaasabadan waxaa si wadajir ah u abaabulay Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Yukreeniyaan iyo NGO-ga Is-dhexgalka iyo Xarunta Horumarinta ee Macluumaadka iyo Cilmi-baarista. [sii wad akhriska…]
Barnaamijka waddanka ee Adeegga Nabadda Madaniga (CPS) waxaa loogu talagalay in lagu taageero ka gudubka polarities bulsheed ee Bariga Ukraine iyada oo loo marayo tallaabooyinka waxbarashada nabadda. Xilliga kama dambaysta ah ee arjiga: Sebtember 9. [sii wad akhriska…]